Iyini i-impedance yesici ku-PCB?Indlela yokuxazulula inkinga ye-impedance?
Ngokuthuthukiswa kwemikhiqizo yamakhasimende, kancane kancane ikhula ibheke ohlangothini lwezobunhloli, ngakho-ke izidingo zebhodi le-PCB le-impedance ziya ngokuya ziba nzima, okuphinde kukhuthaze ukuvuthwa okuqhubekayo kobuchwepheshe bomklamo we-impedance.Kuyini impedance isici?1....
Iyini I-Solder Mask Futhi Isetshenziselwa Yini?
I-Solder mast iyingxenye ebaluleke kakhulu yamabhodi wesifunda aphrintiwe we-PCB, Akungabazeki ukuthi imaski ye-Solder izosiza ekuhlanganiseni, noma kunjalo yini enye imaski ye-solder efaka isandla kuyo?Kuzodingeka sazi kabanzi mayelana ne-solder mask ngokwayo.Yini...
Yiziphi izinto ezisetshenziswa kakhulu ze-CCL ezisetshenziselwa i-PCB?
Emkhakheni wamabhodi esekethe ye-elekthronikhi, ukuze kuhlangatshezwane nezidingo ezengeziwe zomkhiqizo, ama-CCL amaningi agcwala emakethe.Iyini i-CCL?Iyiphi i-CCL edume kakhulu neshibhile?Kungase kungagxili konjiniyela abaningi bama-electronics abancane.Lapha, uzofunda okuningi ...
Yini okudingeka siyazi ngomkhiqizi we-PCB waseShayina?
Ngokuthuthuka okusheshayo kobuchwepheshe be-electronics e-China.Abakhiqizi abaningi be-PCB base-China banikeza isevisi yabo engcono kakhulu kumakhasimende emhlabeni jikelele.kodwa yini okudingeka sikwazi ngomkhiqizi we-PCB waseShayina lapho sisebenzisana nabo?...
Kungani sifaka i-PCB njenge-tab-routing?
Enqubweni yokukhiqiza i-PCB, siyacasulwa ukuthi siphakanyiswe i-Palize PCB njengomzila wethebhu ukuze ubhekane namabhodi ethu emaphethelweni.lapha sizokunikeza isingeniso esiningiliziwe senqubo yethebhu -umzila.Kuyini umzila wethebhu?...
Kungani ukunamathela okuhlelekile kubalulekile ku-PCB?
Konjiniyela abaningi bezinto zikagesi, mhlawumbe, bangochwepheshe ekuklameni amabhodi abo e-PCB, futhi bazi kahle ukuthi hlobo luni lwendawo yokusebenza i-PCB yabo ezosetshenziswa kuyo, kodwa abanalo ulwazi lokuthi bangawavikela kanjani amabhodi wabo wesifunda nezingxenye futhi banwebe. ..
Kungani I-BOM Iyisihluthulelo Se-PCB Assembly
Iyini i-'Bill Of Materials -BOM' BOM iwuhlu olubanzi lwezinto ezingavuthiwe, izingxenye kanye namaqoqo adingekayo ukuze kwakhiwe, kukhiqizwe noma kulungiswe umkhiqizo noma isevisi.Ibhili lezinto zokwakha livamise ukuvela ngefomethi ye-hierarchical, enezinga eliphezulu le-disp...
Ungamthola Kanjani Umkhiqizi We-PCB E-China?
Namuhla, ngokwanda okumangalisayo kwezidingo ze-PCB.Bayanda abakhiqizi be-PCB abasafufusa, ikakhulukazi e-China eyaziwa ngokuthi yimboni yomhlaba wonke.Amakhasimende emhlabeni wonke afuna umkhiqizi we-PCB wekhwalithi ephezulu e-China, Nokho, singathola kanjani ...
Ukwenziwa Kwe-PCB Eshibhile E-China
Uma kukhulunywa ngemboni ye-PCB ye-elekthronikhi, abantu bahlala benaka kakhulu imakethe yaseShayina.bakhetha ukubheka umkhiqizi we-PCB eChina, Kungani lokho kudume kangaka konjiniyela emhlabeni wonke kuwumbuzo....
Indlela yokuklama i-silkscreens efundekayo ecacile?
I-PCB Silkscreen ivamise ukusetshenziswa ngonjiniyela ekukhiqizeni nasekuhlanganiseni i-PCB, Nokho, Abaklami abaningi be-PCB bacabanga ukuthi inganekwane yesikrini sikasilika ayibalulekile njengesekhethi, ngakho-ke babengenandaba nobukhulu benganekwane kanye nesimo sendawo, Yini i-PCB design silkscreen for i...
Iyini iRigid Flex PCB futhi Kungani?
Ngokuthuthuka kobuchwepheshe be-elekthronikhi, amabhodi wesekethe, njengoba ophethe izingxenye ze-elekthronikhi engenakuhlukaniswa nempilo yethu, izimfuno eziphakeme kanye nokuhlukahluka kwemikhiqizo ye-elekthronikhi sekube yimbangela yokuthuthukiswa kobuchwepheshe bebhodi lesifunda...
Iyini Impedance ebhodini le-PCB?
Uma kukhulunywa nge-impedance, onjiniyela abaningi banezinkinga eziningi ngayo.Ngoba kukhona okuguquguqukayo okuningi okuthinta inani le-impedance elawulwayo ebhodini lesifunda eliphrintiwe, noma kunjalo, yini i-impedance futhi yini okufanele siyicabangele lapho kulawulwa impedance?...